Makumi maviri akaurayiwa mukutsika kweZuva Idzva muIndia Kashmir shrine
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Makumi maviri akaurayiwa mukutsika kweZuva Idzva muIndia Kashmir shrine
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mutungamiriri weIndia, Narendra Modi akataura mashoko enyaradzo kumhuri dzevakakuvadzwa, achiraira kuti "zvese zvinogoneka zvekurapa uye rubatsiro kune vakakuvara" kuti vapihwe.
Kurwa kwakaitika paZuva Regore Idzva kunze kweMata Vaishno Devi Hindu shrine mutaundi diki reKatra munzvimbo inotungamirwa neIndia. Kashmir, zvichikonzera kudhumhana kunouraya, kwakauraya vanhu vanenge 12 vaienda kunzvimbo tsvene.
Vachicherechedza zuva rokutanga regore, vanamati vaidirana kunzvimbo tsvene, yakatsaurirwa kuna Amai mwarikadzi Devi wechiHindu, muuzhinji apo wachi yakarovanya pakati pousiku.
Rwendo rwerunyararo rwakakurumidza kuita bongozozo mushure mekunge mapoka maviri evafambi vakamirira nguva yavo patemberi vakatanga kurwisana nemumwe nemumwe, mapurisa emunharaunda nevatori venhau vakashuma.
"Chiitiko ichi chakaitika nenguva dza2:45 mangwanani, uye semashumo ekutanga, gakava rakamuka izvo zvakaita kuti vanhu vasundane, zvichiteverwa nekupokana," mukuru wemapurisa Dilbagh Singh akadaro.
Basa guru rekununura rakatanga mushure mezviitiko.
Vanenge gumi nevaviri vanamati vakakuvara mumelee uye vakaendeswa kuzvipatara zvakasiyana munzvimbo iyi, vezvenhau veko vakashuma.
Kuenda kunzvimbo tsvene kwakamiswa kwenguva pfupi asi kwakazotangwazve mushure menguva pfupi.
muIndiya Mutungamiriri weNarendra Modi vakapa nyaradzo kumhuri dzevakakuvadzwa, vachiraira kuti “rubatsiro rwese rwunobvira rwekurapa uye rubatsiro kune vakakuvara” rupiwe.
"Zviri kusuwa zvakanyanya nekurasikirwa nehupenyu nekuda kwekutsika kwaMata Vaishno Devi Bhawan. Nyaradzo kumhuri dzakafirwa. Dai vakakuvara vakapora munguva pfupi, "Modi akadaro.